आईपीसीले लगानीलाई कसरी असर गर्छ? | अर्थव्यवस्था वित्त
सीपीआईले कसरी लगानीलाई असर गर्छ?
मुद्रास्फीति एक आर्थिक प्रक्रिया हो जुन उत्पादन र माग बिचको अवस्थित असंतुलनले गर्दा हुन्छ; सबै भन्दा उत्पादन र सेवाहरूको मूल्यहरु मा लगातार वृद्धि को कारण, रaपैसा मूल्य को घाटा प्राप्त गर्न वा तिनीहरूको उपयोग गर्न सक्षम हुन। आफैमा यो इक्विटी बजार को विकास संग धेरै गर्न छैन। तर यसको सट्टामा, यो महत्वपूर्ण आर्थिक चरको आधारमा विकसित भएका नीतिहरू मार्फत। त्यसबखत केहि निश्चित समयमा यसले शेयर बजारलाई वृद्धि वा गिरावट बनाउन सक्छ।
सिद्धान्तमा, क कम मुद्रास्फीति सूचीबद्ध कम्पनीहरूलाई मद्दत गर्दछ इक्विटी बजार मा राम्रो प्रदर्शन। यो तथ्य यसले कामदारहरूको भाडामा लिने प्रभावहरूको कारण हो, तलब समीक्षा र यहाँसम्म कि उनीहरूले आफ्नो व्यवसायको लाइनहरू लिनको लागि प्राप्त गरेको वित्तियतामा पनि। कम्पनीहरु बढ्नका लागि यी सबै अधिक अनुकूल वातावरणमा अनुवाद हुन्छ। र तसर्थ, सिद्धान्त मा, यो इक्विटी बजार मा यसको मूल्यांकन गर्न को लागी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर धेरै आर्थिक प्यारामिटरहरू भन्दा धेरै सिबिलिने तरीकामा।
अर्कोतर्फ, हामी यस समयमा बिर्सन सक्दैनौं कि अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज उनीहरूको उत्तम व्यवहार छ अवधिहरूमा जब मुद्रास्फीति समावेश गरिएको थियो वा कम्तिमा सामान्य भन्दा कम। पुनर्मूल्यांकनहरूको साथ जुन सबै अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तहमा पुगेको छ। यो एक पक्ष हो जुन तपाईंले अबदेखि खातामा लिनुपर्नेछ जब तपाईं विश्वको कुनै पनि स्टक सूचकांकमा स्थिति खोल्न जाँदै हुनुहुन्छ। प्राविधिक प्रकृतिका अन्य विचारहरू पछाडि र सायद यसको आधारभूतहरूको दृष्टिकोणबाट पनि।
1 उच्च सीपीआई
2 कसरी यी परिदृश्यहरूमा कार्य गर्ने?
3 यस बखत सीपीआई
4 अन्तर्निहित मुद्रास्फीति
5 फुर्सत र खानामा बढाउनुहोस्
6 स्थिर मूल्य सूचकांक
अर्कोतर्फ, उच्च सीपीआईले एक देश वा आर्थिक स्थानमा धेरै सान्दर्भिक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। सबैभन्दा धेरै प्रभावित बजार मध्ये एक मुद्रामा ठूलो अस्थिरता संग एक क्रस संग, मौद्रिक एक हो भन्ने कुरा। विशेष गरी ती अमेरिकी डलर र यूरो को सन्दर्भ मा। यसको अर्थ संसारभरिका सरकारहरूद्वारा आर्थिक नीति डिजाइन गर्नु भनेको के हो। अभ्यासमा यसको वास्तविक अर्थ उच्च सीपीआई हो सानो र मध्यम लगानीकर्ताको हितको लागि राम्रो छैन। शेयर बजारहरू सामान्यतया यो मुद्रास्फीति वा उच्च मूल्य परिदृश्यमा राम्रो प्रदर्शन गर्दैन
अर्कोतर्फ, यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि यसले मजदुरहरूको तलबलाई असर गर्ने गरी अन्त गर्न सक्दछ। र यस अर्थमा, अन्तमा यो सूचीबद्ध कम्पनीहरूको परिणाममा हस्तान्तरण हुन्छ जुन इक्विटी बजारमा उनीहरूको मूल्यांकन हराउन सक्छ। यद्यपि यो दृश्य तरीकामा अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक र मौद्रिक प्यारामिटरहरू मार्फत होईन। उदाहरण को लागी, GDP, बेरोजगारी डाटा र व्यापार वा राज्य घाटा। के शेयर बजार विकासको उत्प्रेरक, हालसालैका वर्षहरूमा तपाईले देख्नु भएको छ।
यो एक पक्ष हो जुन तपाईंले अबदेखि खातामा लिनुपर्नेछ जब तपाईं विश्वको कुनै पनि स्टक सूचकांकमा स्थिति खोल्न जाँदै हुनुहुन्छ। प्राविधिक प्रकृतिका अन्य विचारहरू पछाडि र सायद यसको आधारभूतहरूको दृष्टिकोणबाट पनि।
कसरी यी परिदृश्यहरूमा कार्य गर्ने?
होईन, आईपीसी डाटाको आधारमा इक्विटीमा अपरेट गर्न यो धेरै सजिलो हुँदैन। यदि होईन भने यसको विपरित, यस प्रकारको कार्यवाही गर्न यो धेरै गाह्रो हुन्छ। जहाँ उनीहरूसँग केहि प्रासंगिकताको अन्य आर्थिक डेटा हुनुपर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो लगानीमा निर्णय लिन सक्नुहुनेछ, एक अर्थ वा अर्कोमा। किनभने वास्तवमा, छोटो अवधिमा मुद्रास्फीति पक्कै कम्तीमा साना र मध्यम लगानीकर्ताको मापन मा शेयर बजार मा सूचीबद्ध छैन। यस अर्थमा, यो लगानी रणनीति पूरा गर्न धेरै व्यावहारिक छ कि मुद्रास्फीति तल जान्छ भने तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ शेयर ट्रेडिंग मा अधिक पैसा उजागर। जबकि यो बढ्यो भने यसले सम्पूर्ण विश्व को शेयर सूचकांक मा अधिक समस्या पैदा गर्न सक्दछ।
विशेष गरी मुद्रास्फीति को सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छ अर्को पक्ष यो इक्विटी बजार मा सूचीबद्ध कम्पनीहरु सूचीबद्ध छन् जसको लागि अन्य कारकहरु संग सम्बन्धित हुन सक्छ। त्यो कुरा एकदम चुपचापमा तिनीहरूको मूल्य एक वा अन्य तरिकामा उतार चढाव हुन सक्छ। जहाँ यो सामान्य छ कि सानो र मध्यम लगानीकर्ताहरूले आफैंलाई व्यापार परिदृश्यमा यस अवस्थालाई महसुस गर्दैनन्। यो त्यस्तो चीज हो जुन सँधै वित्तीय बजार क्षेत्रमा देखा पर्दछ।
अर्कोतर्फ, मुद्रास्फीति भन्न सकिन्छ कि यो केहि प्रभावकारी अर्को एक लगानी पोर्टफोलियो विकसित गर्न को लागी केहि बर्षहरु छैन। तर उदाहरण को लागी, यो एक त्यस्तो कारक हो जुन यस समयमा यस तथ्यसँग कुनै सरोकार छैन कि स्पेनी इक्विटीको बेन्चमार्क सूचकांकमा ,9.000, ००० बिन्दुको समर्थन भ broken्ग भएको थियो र त्यसले आईबेक्स 35 8.300 मा सबै अलार्म निम्त्याएको छ। पोइन्ट जुन यो जोड दिन सकिंदैन कि आउने महिनाहरूमा यो XNUMX, points०० बिन्दुको धेरै नजिक जान सक्छ।
यस बखत सीपीआई
राष्ट्रिय सांख्यिकी संस्थान (आईएनई) ले दिएको पछिल्लो तथ्यांकका अनुसार जूनमा सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको वार्षिक दर ०..0,4 प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो महिना दर्ता भएको भन्दा चार दशांश कम हो। जहाँ यो देखाइएको छ कि वार्षिक दरमा कमीमा सबैभन्दा ठूलो प्रभावको साथ समूहहरू हुन्: यातायात, जुन 0,0% को वार्षिक भिन्नता प्रस्तुत गर्दछ, गत महिना भन्दा लगभग दुई पोइन्ट कम। यो जून २०१ in मा दर्ता गरिएको वृद्धिको तुलनामा यस महिना ईन्धन र स्नेहक मूल्यमा भएको कमीको कारण हो।
अर्को हाउसिंग हो, जसको दर एक भन्दा बढि बिन्दुले घट्यो, –१..1,5% मा खडा, को कारणले बिजुलीको मूल्यमा खस्छ र तरल ईन्धनहरू, जुन २०१ 2018 मा वृद्धि भयो। यसको पक्षका लागि, समूह जसले वार्षिक दरमा यसको सकारात्मक प्रभावको लागि खडा गर्दछ: फुर्सत र संस्कृति, जसले यसको दर -०..0,4% मा राख्छ, जुन मे भन्दा माथि आठ दशौं, मुख्य रूपमा परिणामको रूपमा २०१ tourist भन्दा धेरै पर्यटक प्याकेजको मूल्यमा वृद्धि भएको हो।
अर्कोतर्फ, मुद्रास्फीतिको वार्षिक भिन्नता दर (गैर प्रसंस्कृत खाद्य र उर्जा उत्पादनहरू बाहेक सामान्य सूचकांक) दुई दशौंमा वृद्धि भई ०.0,9% पुगेको छ, जुन भाकपा सर्वसाधारणको भन्दा पाँच दशमौं हो। मुख्य मुद्रास्फीति को वार्षिक दर सामान्य सीपीआई भन्दा माथि थिएन जनवरी २०१ 2018 देखि। अर्कोतर्फ सीपीआईको मासिक दरमा सबैभन्दा ठूलो नकरात्मक प्रभाव भएका समूहहरू: यातायात, जसको –१..1,4% को भिन्नता ईन्धनको मूल्यमा भएको कमीले ०.०२२२ को प्रभाव छ।
Clothing१.%% को दरको साथ लुगा र जुत्ता, जुन वसन्त र गर्मी बिक्री अवधिको सुरूमा मूल्यहरूको व्यवहार प्रतिबिम्बित गर्दछ। सामान्य समूहमा यो समूहको प्रभाव ०.०.1,3 is हो। हाउजिंग, जसले यसको भिन्नता –०..0,083% मा राख्छ र – ०.०0,6० को प्रभाव पार्दछ, बिजुलीको मूल्यमा गिरावटको परिणाम स्वरूप र थोरै हदसम्म ग्यास।
फुर्सत र खानामा बढाउनुहोस्
तिनीहरूको पक्षका लागि, सामान्य सूचकांकमा सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक प्रभाव भएका समूहहरू हुन्: फुर्सत र संस्कृति, १.1,7% को दर र ०.0,140० को प्रभावको साथ, लगभग पूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको टुर प्याकेजको मूल्यहरुमा वृद्धि। खाद्य र गैर-मादक पेय पदार्थ, जसले ०..0,4% को दर र ०.0,074 को प्रभाव प्रस्तुत गर्‍यो, जुन फलको मूल्यमा बढाइबाट र केही हदसम्म मासुको प्रेरणाले प्रेरित थियो। यो ध्यान दिए पनि लायक छ, जबकि विपरीत दिशामा, माछा र शंख, फलफूल र तरकारीहरू र तेल र बोसो को मूल्यहरु मा गिरावट।
बृहत् सिपीआईको वार्षिक दर मेको तुलनामा जूनमा सबै स्वायत्त समुदायहरूमा घट्यो। सबैभन्दा ठूला कमीहरू क्यान्टाब्रिया र क्यास्टिला वाई लियोनमा भयो, छ दशौंको थोपाको साथ। तिनीहरूको पक्षका लागि क्यानरी टापु र बास्क कन्ट्री स्वायत्त समुदायहरू हुन् जसको वार्षिक दर अघिल्लो महिनाको तुलनामा दुई दशमौं सब भन्दा कम गिरावट आएको छ। अर्कोतर्फ, यो जोड दिन जरुरी छ कि एचआईसीपीको वार्षिक परिवर्तन दर ०..0,6% छ, जुन अघिल्लो महिना दर्ता भएको तीन दशमांश भन्दा कम छ। अर्कोतर्फ, HICP को मासिक भिन्नता ०.०% छ।
स्थिर मूल्य सूचकांक
राष्ट्रिय सांख्यिकी संस्थान (आईएनई) द्वारा विश्लेषण गरिएको अवधिमा यो कुरा पत्ता लाग्यो कि स्थिर कर (सीपीआई-आईसी) मा बजारको वार्षिक परिवर्तन दर ०..0,4 प्रतिशत छ, सीपीआई सामान्यले दर्ता गरेको जस्तै। सीपीआई आईसी को मासिक परिवर्तन दर –0,1% छ। यसको अंशको लागि, लगातार करहरू (आईपीसीए-आईसी) मा एचआईसीपीले ०..0,6% को वार्षिक दर प्रस्तुत गर्दछ, एचआईसीपीको जस्तो समान। जबकि अन्तमा, एचआईसीपी-आईसी को मासिक भिन्नता दर ०.०.१% छ, INE द्वारा प्रदान गरिएको डाटाका अनुसार।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » सीपीआईले कसरी लगानीलाई असर गर्छ?